လက်ရှိမှာသင်ဟာ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နေပါသလား? မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သလဲ? | Mycanvas
လက်ရှိမှာသင်ဟာ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နေပါသလား? မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သလဲ?
လှုံ့ဆော်မှု (Motivation) ဟာ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးမြောက်စေရန်အတွက် အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ လှုံ့ဆော်မှု (Motivation) ဆိုတာ ဘာလို့အရေးကြီးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားတွေရှိနေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေခြင်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသုခချမ်းသာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှု၊ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း စသည်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ၊ ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများဆီသို့ ဦး တည်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခုမှာ ‘Type X’ ဟုခေါ်သောပြင်ပလှုံ့ဆော်မှု (Extrinsic motivation) ဖြစ်ပါတယ်။ Type X ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုဟာ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုများ၊ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် မက်လုံးများကဲ့သို့သောပြင်ပအချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလှုံ့ဆော်မှုအချက်အမျိုးအစားဟာ လူတွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ရောက်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလှုံ့ဆော်မှုဟာ ရေတိုအလုပ်နှင့် ပုံမှန်အလုပ်အတွက်သာအထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဤလှုံ့ဆော်မှုကိုမစီမံနိုင်ပါက လူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ အခြားတစ်ခုမှာ ‘Type I’ ဟုခေါ်သော ပင်ကိုယ်လှုံ့ဆော်မှု (Intrinsic motivation) ဖြစ်ပါတယ်။ Type I ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုဟာ သိလိုစိတ်၊ စိတ်၀င်စားမှုနှင့် အောင်မြင်မှုရရှိရန် ထားရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက် စတဲ့အတွင်းပိုင်းအချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကိုယ်လှုံ့ဆော်မှုကို အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူများထက် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များကိုပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ‘Type I’ လှုံ့ဆော်မှုခံရသူများသည်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအလွယ်တကူခံစားရနိုင်ပါတယ်။